အက်ဒမင်ဖြန့်ချိသည့်အခါကလစ်နှိပ်သော WordPress Plugin | Martech Zone
အက်ဒမင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အတူ Clicky WordPress Plugin
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 14, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 4, 2007 Douglas Karr
Clicky တော်တော်ချိုတယ် analytics အဲ့ဒီထဲကယောက်ျားလေးတွေထက်အခြေခံအသုံးပြုသူအတွက်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ application တစ်ခု။ စျေးကွက်ငယ်ကကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ကလစ်ကီကမကြာခင်မှာပဲပိုင်ဆိုင်သင့်တယ်၊ ချောချောမွေ့မွေ့သော interface, ဂရပ်ဖစ်အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်ပြသသတင်းအချက်အလက်ပျမ်းမျှဘလော့ဂါများအတွက်စုံလင်သည်.
ခဏကြာသော် Clicky သည် Wordy ကို WordPress ထဲသို့ထည့်ရန် WordPress Plugin ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Sean သည်သူ၏ Goodie Page တွင် WordPress အကြောင်းသိပ်မသိသောကြောင့် WordPress Admin interface အတွင်းမှ application ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်ဆောက်လိုသော်လည်းသူ၏ Goodie Page တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။ ငါကလစ်ကီမှာလုပ်ခဲ့ပြီးသောအလုပ်ကိုတကယ်သဘောကျပြီးသူတို့ကိုငါကူညီနိုင်မလားဆိုတာမျဉ်းကြောင်းတစ်ခုချလိုက်သည်။ အဖြေကသေချာတယ်။
အဲဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာနာရီအနည်းငယ်အကြာမှာအင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ admin စာမျက်နှာကိုငါတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ Sean သည်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ပြီး Clicky နှင့်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပုံစံထုတ်ခဲ့သည် ဒီနေ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်! သင်ဤကဲ့သို့သောကူညီရန်အခွင့်အလမ်းရလေ့ရှိသော်လည်းမကြာခဏ Clicky get mainstream ကိုကျင့်သုံးလိုသည်။ ဒါကပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယူပါ ကလစ်နှိပ်သော Web Analytics အကောင့်ပြီးတော့ download လုပ်ပါ Clicky WordPress Plugin ကို.
ဇွန် 14, 2007 မှာ 5: 02 pm တွင်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က getclicky နှင့်ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပြဿနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုခွဲထုတ်ပြီးယခု၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုပုံရသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ သူတို့ရဲ့ 'ဘလော့ဂ်' ပက်ကေ့ချ်အတွက် အကောင့်ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို $19 နဲ့ ဘလော့ဂ်3ခုအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပေးဆောင်ပါတယ်။
ငါသေချာပေါက် plugin ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဇွန်လ 15 ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက် 1 နာရီ 56 မိနစ်
နောက်ထပ်အလုပ်ကြီးတစ်ခုက Doug။ သင်သည် ယခုအခါ WordPress ပလပ်အင်များဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနေပြီ 🙂